Ndekọ Ndu: Arthur Kuuku Emmanuel Lennox | Igbo kasahorow
Monde. Ọnwa Asaa 4, 2022
Anokwale by GhanaThink, Satọde. Ọnwa Abụọ 13, 2021 - Monde. Ọnwa Isii 27, 2022. 𓀠 954
Ubochi omumu ahụ nke Arthur Lennox bụ Wenezde. Ọnwa Nke Anọ 25, 1979.
Nne na nna ya bụ Arthur Alexander na Arthur Stella.
Ọ nwere nwanne nwanyị mara mma atọ.
Ọ bụ nwoke amamihe.
Lennox bụ ọnye ndu ezigbo.
1999 n'ime, ọ njem ezi n'ụlọ ya na.
London n'ime, ọ ghọọ gụsịrị akwụkwọ.
Ọ ọrụ ụmụ afọ ọtụtụ.
2009 n'ime, ọ bia Ghana ruo.
Arthur Lennox anwụ Tọsde. Ọnwa Iri na Abụọ 31, 2020 na.
#ndekọ ndu #ubochi omumu #Lennox #Arthur #ya #nne na nna #Alexander #Stella #ọ #nwere #atọ #mara mma #nwanne nwanyị #amamihe #nwoke #ezigbo #ọnye ndu #n'ime #1999 #njem #na #ezi n'ụlọ #London #ghọọ #gụsịrị akwụkwọ #ọrụ #ọtụtụ #afọ #2009 #bia #ruo #Ghana #anwụ #na